Eriri Optical Splice mmechi Manufacturers & Suppliers - China Fiber Optical Splice Mmechi Factory
Mmechi eriri optic splice (FOSC) nke ọzọ akpọrọ fiber optic splicing mmechi, bụ ngwaọrụ eji nye ohere na nchebe maka eriri eriri optic gbakọtara ọnụ n'oge arụ ọrụ etiti etiti fiber optic. Enwere ike itinye ya n’ime ala, ụgbọelu, na-arịgo mgbidi, na-arịgo okporo osisi na ụzọ ụgbọ mmiri.
Dị ka ngwa dị iche iche si dị, e nwere ihe abụọ ụdị fiber optic na-emechi na ahịa maka ndị ọrụ ịhọrọ: Ntugharị ụdị nke eriri optic na ụdị mmechi vetikal.
Kwụsị ụdị eriri optic dị ka igbe dị larịị ma ọ bụ nke cylindrical, ụdị mmechi a na-ejikarị arụ ọrụ mgbidi, na-arị elu ma lie ya n'okpuruala. Vetikal ụdị eriri optic mmechi na-akpọ dome ụdị eriri optic mmechi, ọ bụ dị ka a dome na n'ihi na dome udi na-eme ka ọ dị mfe itinye na ọtụtụ ebe.
Jear FOSC bụ nke plastik na-eguzogide ọgwụ nke 1 ọkwa UV ma tinye ya na akara nke na-eme ka ihu igwe na nchara nchara, nke na-enye arụmọrụ obi ike ma ọ bụ n'elu ma ọ bụ lie ya n'okpuru ala n'oge nrụpụta netwọkụ FTTX.
Eriri optic splice closures nwere ike itinye ya site na bolts ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara ngwa ngwa, ngwa niile dị mkpa dị na ngwaahịa jera, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ maka nkọwa n'ọdịnihu.
Mmechi eriri optic splice, FOSC-2D, nkwonkwo 48
Eriri optic splice mmechi, FOSC-3, 96 nkwonkwo
Eriri optic splice mmechi, FOSC-4 (144)
Ftth Fiber optic splice mmechi, FOSC-5 (96)
Eriri optic splice mmechi, FOSC-8 (12), 8 fibe ...
Eriri optic splice mmechi 4 nkwonkwo, FOSC-9 (4)
Eriri optic splice mmechi, FOSC-7 (96)
Eriri optic splice mmechi, FOSC-6 (96)